Qaadka oo maalintii labaad ka maqan Muqdisho & magaalooyin kale – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaadka oo maalintii labaad ka maqan Muqdisho & magaalooyin kale
A warsame 16 February 2015 16 February 2015
Mareeg.com: Waxaa maalintii labaad xaniban ganacsigii qaadka ee ay Kenya u dhoofin jirtay Somalia, kaasoo la joojiyay kadib markii uu ismari waa ka dhashay qiimaha uu ku kacayo.
Ganacsatada Soomaalida ayaa iska joojiyay badeecadii qaadka ee ay ka heli jireen Kenya, iyagoo caro ka muujiyay lacagta qaadkaasi oo si aad ah sare loogu qaaday.
Sababta loo joojiyey qaadka ayaa ah isagoo qaali ka ah Kenya iyo dowladda Soomaaliya oo canshuur adag kusoo rogtay.
Tallaabadaan ayaa noqoneysa mid saameyn ku yeelatay dad fara badan oo ay noloshooda ku tiirsaneyd ganacsigaasi.
Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ah ee isticmaali jiray qaadka ayaa ka hadlay arintaan iyagoo siyaabo kala duwan uga war bixiyay saameynta ay keeneyso iyo isbadalka ka dhalan kara. Waxaana intooda badan ay soo dhaweeyeen joojinta jaadka.
Kenya ayaa Somalia maalin walba u dhoofin jirtay qaad magaalooyin dhowr ah lagu geyn jiray diyaarado qaas ah, iyo gawaari, ganacsigaasi oo ay Kenya kasoo xareen jirtay lacag malaayiin dolar ah.
Dowlada Britain oo ka mid ahayd meelaha ugu badan ee qaadka loo dhoofiyo ayaa horay uga mamnuucday dalkeeda in la geeyo wax qaad ah, taasoo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dadka ku tiirsan ganacsiga qaadka ee dalkani Kenya.
Milateriga Masar oo duqeyn cirka ku qaaday Daacishta Liibiya
Maxkamada ciidamada Puntland oo 8 qof ku riday xukuno dil & xabsi